Aarskog-Scott Syndrome (အားစ်ကော့စကော့ရောဂါစု) - Hello Sayarwon
Aarskog-Scott Syndrome (အားစ်ကော့စကော့ရောဂါစု)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Aarskog-Scott Syndrome (အားစ်ကော့စကော့ရောဂါစု)
Aarskog-Scott Syndrome (အားစ်ကော့စကော့ရောဂါစု) ကဘာလဲ။
အားစ်ကော့စကော့ရောဂါစုဆိုတာ ကိုယ်ခန္ဓါ အစိတ်အပိုင်းများစွာရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ထိခိုက်စေတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇချို့ယွင်းမှုတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေဟာ အမျိုးသားများမှာ ဖြစ်ပွားတတ်တာ တွေ့ရများပြီး အမျိုးသမီးများမှာလည်း အသင့်အတင့် တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
အားစ်ကော့စကော့ရောဂါစုဖြစ်ပွားသူများမှာ ထူးခြားတဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင် (ဥပမာ မျက်လုံးအိမ်ကျယ်တာ၊ နှာခေါင်းသေးတာ၊ နှာခေါင်းနဲ့ ပါးစပ်ကြားနေရာ ရှည်လျားတာ၊ နဖူးဆံစပ်ချွန်တာ စတာတွေ) တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကလေးဘဝမှာ အရပ်ပုတာမျိုးတွေ့ရတတ်ပေမယ့် လူပျိုအပျိုဖော်ဝင်ခါစမှာပါ ဆက်လက်ကြီးထွားနေတာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Aarskog-Scott Syndrome (အားစ်ကော့စကော့ရောဂါစု) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အားစ်ကော့စကော့ရောဂါစုဖြစ်ပွားတာ ရှားပါးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်ပွားနှုန်းဟာလည်း ရောဂါအတည်ပြု နိုင်တာမျိုး မလုပ်ဖြစ်တာကြောင့် အတိအကျမသိရပါဘူး။
ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေအရာတွေကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်တွေ ထပ်သိရအောင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
Aarskog-Scott Syndrome (အားစ်ကော့စကော့ရောဂါစု) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အောက်ပါလက္ခဏာတွေဟာ အားစ်ကော့စကော့ရောဂါစု ဖြစ်ပွားသူတွေမှာ တွေ့ရများပါတယ်။
ပေါင်ခြံ၊ ကပ္ပယ်အိတ်စသည်တို့ ရောင်ရမ်းခြင်း
အသက် ၂နှစ်မှ သုံးနှစ်အထိ အရပ်ပုသည်ကို မသိသာခြင်း
လက်ဖဝါးတွင် တခုတည်းသော အရေးအကြောင်း ရှိခြင်း
လက်နှင့်ခြေထောက်သေးပြိး ကျယ်ခြင်း၊ လက်ချောင်းများ တိုသည့်အပြင် လက်သန်း ကောက်နေခြင်း
အပေါ်နှုတ်ခမ်းမြောင်းနှင့် အောက်နှုတ်ခမ်း အရေးအကြောင်း ကျယ်နေခြင်း
မျက်အိမ်ကျယ်၍ မျက်ခွံကျခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Aarskog-Scott Syndrome (အားစ်ကော့စကော့ရောဂါစု) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
FGD1 ဗီဇမှာ ချို့ယွင်းမှုရှိရှိ စစ်ဆေးခြင်း။ FDGY1 ဗီဇမှာလည်း ချို့ယွင်းမှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ ချို့ယွင်းမှုတွေ့တယ်ဆိုရင် မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ တခါတရံမှာ fetal alcohol ရောဂါစုနဲ့ မှားနိုင်ပါတယ်။
Aarskog-Scott Syndrome (အားစ်ကော့စကော့ရောဂါစု) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ တခြားရောဂါတွေလိုပဲ အားစ်ကော့စကော့ရောဂါစုကိုလည်း လုံးဝပျောက်ကင်းအောင် မကုသနိုင်ပါဘူး။ ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝနဲ့ နေသွားဖို့ ကုသမှုတွေတော့ ရှိပါတယ်။
မွေးရာပါ ချို့ယွင်းမှုတချို့အတွက်တော့ ခွဲစိတ်ကုသမှု လိုအပ်ပါတယ်။ မျက်နှာပုံပန်းမကျခြင်းကို ခွဲစိတ်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားစေတဲ့ ဟော်မုန်းဓါတ်တွေနဲ့ ကုသခြင်းဟာ အရပ်အမောင်း ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
ဘယ်လို နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက အားစ်ကော့စကော့ရောဂါစုအတွက် အထောက်အကူ ပြုသလဲ
မိသားစုရာဇဝင်မှာ ဒီပြသနာရှိဖူးရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မတိုင်မီမှာ မျိုးရိုးဗီဇ စစ်ဆေးမှု လုပ်သင့်ပါတယ်။
Reference: Aarskog-Scott syndrome. https://ghr.nlm.nih.gov/condition/aarskog-scott-syndrome . Accessed May 12, 2017.
Aarskog-Scott syndrome. https://medlineplus.gov/ency/article/001654.htm . Accessed May 12, 2017.
Aarskog-Scott syndrome. https://medlineplus.gov/surgeryandrehabilitation.html . Accessed May 12, 2017.